Shiinaha L-Tryptophan CAS 73-22-3 loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Pharma Grade (USP) | Salaad
L-Tryptophan CAS 73-22-3 ee Fasalka Pharma (USP)
Magaca Badeecada ： L-Tryptophan
CAS MAYA .: 73-22-3
Muuqaalka ： Caddaan ilaa waxyar oo huruud ah ama budada dhalada ah
Astaamaha alaabta: Udgoon, waxoogaa qadhaadh. Xoogaa ku milma biyaha, ku yaraada ethanol iyo ku milmi karin chloroform, laakiin ku milmi kara sodium hydroxide xalka ama ku milmi hydrochloric acid, aadna ugu fudud milixda. Midab yeelo mar aad iftiinka uhesho waqti dheer.
Xirxirida ： 25kg / kiish ama sida macaamiisha looga baahan yahay
Magaca Badeecada: L-Tryptophan
CAS MAYA.: 73-22-3
L-Tryptophan (Abbreviated Isku day) waa mid ka mid ah amino acids bani'aadamka iyo xoolahaba. Laakiin ma soo saari karo jirku.
Sida amino acids-ka kale, L-Tryptophan waa mid ka mid ah dhismooyinka borotiinka. Laakiin si ka duwan amino acids-ka qaar, L-Tryptophan waxaa loo arkaa inay muhiim tahay maxaa yeelay jidhku ma soo saari karo tiisa. L-Tryptophan wuxuu ka ciyaaraa doorar badan xayawaanka iyo aadanahaba. Laakiin laga yaabee tan ugu muhiimsan, inay tahay horudhac lama huraan u ah tiro neurotransmitters ah maskaxda. Sidan oo kale, L-Tryptophan waa maaddada kaliya ee sida caadiga ah laga helo cuntada oo loo rogi karo serotonin. Maaddaama serotonin loo beddelay maskaxda melatonin, L-Tryptophan wuxuu si cad uga ciyaaraa doorka dheelitirka niyadda iyo qaababka hurdada.
Waxaa loo adeegsaday kaabis nafaqo iyo antioxidant.
1. Waxaa loo adeegsaday quudinta xoolaha si loo wanaajiyo qaadashada quudinta xoolaha, daciifinta falcelinta culeyska, hagaajinta hurdada xoolaha.
2. Waxaa loo adeegsaday quudinta xoolaha si loo kordhiyo unugyada jirka uurjiifka iyo xoolaha da'da yar.
3. Waxaa loo adeegsaday quudinta xoolaha si loo wanaajiyo dheecaanka caanaha xoolaha.
4. Waxaa loo adeegsaday quudinta xoolaha si loo yareeyo xaddiga cunnada sare ee borotiinka loona badbaadiyo qiimaha quudinta.
Kaabis ahaan nafaqada, L-tryptophan waa inuu ka kooban yahay faleebada amino acid iyo diyaarinta amino acid dhameystiran oo ay weheliso astaamaha kale ee muhiimka ah
L-tryptophan waxaa lagu sameeyaa halsano microbial ah oo gulukooska, soosaarida khamiirka, ammonium sulfate loo isticmaalo walxo cayriin ah laguna nadiifiyo xuubka sifeynta, isweydaarsiga ion, crystallization iyo habka qalajinta.
Assay (oo ku saleysan qallalan) 98.5% ~ 101.5%
Qiimaha PH 5.5 ~ 7.0
Wareeg gaar ah -29.4 ° ~ -32.8 °
Chloride (sida Cl) ≤0.05%
Sulfate (sida SO4) 0.03%
Bir (sida Fe) 0.003%
Biraha culus (sida Pb) .000.0015%
Khasaare ku saabsan qalajinta ≤0.3%
Hadhaaga dabka ≤0.1%
Hore: Glycine CAS 56-40-6 Fasalka Cuntada (FCC / AJI)
Xiga: L-valine CAS 72-18-4 Fasalka Cuntada (AJI USP)
Waxyaabaha lagu daro Cuntada Glycine
Fasalka L-Threonine Pharm
L-Threonine CAS 72-19-5 oo loogu talagalay Fasalka Pharma (USP)
L-Valine 72-18-4, Fasalka L-Threonine Pharm, Nafaqada xoolaha, Fasalka Farmashiyaha L-Leucine, Fasalka Cuntada L-Threonine, 73-32-5 L-Isoleucine,